किन बढ्दैछ संसारभर रासायनिक हतियारको होड ? – shubhabihani
Home / अन्तर्राष्ट्रिय खबर / किन बढ्दैछ संसारभर रासायनिक हतियारको होड ?
किन बढ्दैछ संसारभर रासायनिक हतियारको होड ?
Posted by: admin in अन्तर्राष्ट्रिय खबर April 15, 2017	Comments 315 Views
२ वैशाख, काठमाडौँ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रतिवन्ध लगाएको लामो समय भएपनि संसारभर रासायनिक हतियारको प्रयोग एवम् होडबाजी भने हालसम्म अन्त्य भएको छैन । बरु बढ्दै गएको छ ।
इराकमा रासायनिक हतियार भएको नाममा अमेरिका, उसको गठबन्धन राष्ट्र र उत्तर एटलान्टिक सहयोग सङ्गठन(नेटो) गठबन्धनले हमला गर्यो । मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको हिसाबले उक्त आक्रमण इतिहासकै महंगो सावित भयो अमेरिकालाई । किनकी आजसम्म पनि त्यही विषय उसको टाउँको दुखाइको विषय बनीरहेको छ ।
पछिल्लो पटक सिरियामा सुरु भएको शान्ति वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । परिणाम स्वरुप अहिले सिरिया रासायनिक हतियारको होडबाजीमा परेको छ । रासायनिक हतियारको कारण एकै पटक हजारौँ नागरिक प्रभावित भएका छन् । घाइते भएका नागरिक मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
साना नानीहरु रोइरहेका थिए, हिक्क हिक्क गर्दे वृद्ध वृद्धा अल्लाह बचाउ भनीरहेका थिए । यस्तो ह्ृदयविदारक दृश्य पहिलो पटक देखिएको हो । युद्ध सुरु भएपछिकै यो सबैभन्दा भयंकर र डरलाग्दो क्षण हो, हामी पनि सामान्य मास्क मात्र लगाएर गएका थियौ । राम्रो सवारी साधन पनि थिएन, केही नागरिकको उद्धार गर्यौ तर सबैलाई धेरै दिनसम्म पनि उद्धार गर्न सकिएन एक उद्धारकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई बताएका थिए ।
Previous: नयाँ शक्ति सहित ६८ दलको अनसन सुरु दलीय पहिचान मेटाउन खोजियो : संयोजक भट्टराई
Next: शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरीलाई साढे ५ अर्ब घाटा, क्षतिपूर्ति असुलीमा उन्मुक्ति